«Saddexmidnimada» - Istaraatiijiyad cusub oo loogu talagalay ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
«Saddexmidnimada» - Istaraatiijiyad cusub oo loogu talagalay ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah
Ganacsatada binary, gaar ahaan kuwa bilowga ah, waxay si joogto ah u raadinayaan farsamooyin cusub. Laakiin natiijada baaritaanka ee istaraatiijiyadaha ururinta badan marwalba ma ahan wax faa'iido leh, gaar ahaan haddii loo maleynayo in lagu xoqayo waqtiga M1-M5. Dhanka kale, ciyaartooy xirfadlayaal ah iyo adeegyada calaamadaha ganacsiga, sida vfxAlert, waxay isticmaalaan isku-dhafnaan fudud iyo waqti-tijaabiyay oo ah aaladaha caadiga ah, sida istiraatiijiyadda “Trinity”.
Waqtiga Mid kasta oo ka mid ah M1-D1. Xaaladdeenna, M1 waa la isticmaalay, laakiin muddada falanqaynta ee sii kordheysa, saxnaanta calaamaddu way sii kordheysaa.
Tilmaamayaasha la adeegsaday:
Fudud (SMA) celcelis dhaqaaq leh muddo 10 ah.
Tilmaamaha isbeddelka caadiga ah, kaas oo go'aamin doona jihada guud ee isbeddelka isbeddelka. Istaraatiijiyadda looma jeedin ganacsiga inta lagu jiro xilliyada guryaha. Waxaan ka ganacsaneynaa oo keliya haddii qiyaasta u dhexeysa ugu yaraan 15-25 dhibcood!
RSI oo leh muddo 14 iyo heer dheeri ah oo 50 ah.
Tilmaamayaasha isbeddelka waa in si qasab ah lagu xaqiijiyaa ugu yaraan hal oscillator oo tilmaamaya xaalad xad dhaaf ah markii iibsadayaashu aysan mar dambe u qaadi karin qiimaha kor ama ka badin, halkaas oo aysan jirin cid ugu yaraan suuqa ku iibin karta qiime hoose.
Heerka MACD (12,26,9).
Tilmaamahani wuxuu u shaqeeyaa labadaba isbeddel ahaan iyo sida qalab oscillator ah, markaa waxay noqon doontaa calaamadda ugu dambeysa ee lagu furo ikhtiyaar. Kadib rakibida qalabka, daaqada shaqada terminalku waxay umuuqataa sidan:
Aynu ku bilowno xulashada CALL ee koritaanka la filayo ee labada lamaane. Si loo furo macaamil ganacsi, shuruudaha soo socda ayaa lagama maarmaan ah:
Qadka RSI ee heerka 50 ee kor u dhaafaya;
MACD sidoo kale waxay ka gudubtaa xariiqyadeeda eberka xagga hoose ee hoose ama histogaraamkeeda ayaa soo baxa ka dib ugu yaraan ugu yaraan maxalli ah (calaamadda awoodda dhexdhexaadka ah);
qiimaha ayaa ka sarreeya celceliska dhaqaaqa.
Ikhtiyaarka ayaa ka furmaya shumaca labaad ee ka sarreeya SMA (10) oo leh waqti dhicitaan ah 5-7 daqiiqo. Awoodda ishaaradu way sii kordheysaa haddii shumaca jebiya (ama intiisa badani) uu ka sareeyo celceliska Dhaqdhaqaaqa.
Xaaladaha iska soo horjeedka ah ayaa looga baahan yahay ikhtiyaarka PUT: qiimaha ayaa ka hooseeya SMA, RSI wuxuu ka jabay 50 hoos, MACD sidoo kale kor ayuu u socdaa. Sida aad u arki karto, wax waliba waa wax fudud, oo waxaad si dhakhso leh u bilaabi kartaa ganacsiga, laakiin waa inaad tixgelisaa dhowr arrimood oo saameynaya natiijada ugu dambeysa:
Waxaan ka reyneynaa muddooyinka la sii daayo wararka aasaasiga ah ee aasaasiga ah marka tilmaamayaasha farsamada ay bixiyaan kaliya calaamado been ah. Ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ah looguma talagalin ganacsiga wararka oo dhan tan iyo markii aysan macquul aheyn in la furo amar sugaya, waana mid aad u adag in la saadaaliyo halka (iyo tan ugu muhiimsan, goorma!) Raaci doonto dareenka ugu horreeya ee suuqa. Xullo muddooyinka isdaba-marinta oo leh asalka ugu yar ee wararka iyo isku-bedbeddelka celceliska. Calaamaduhu badanaa way dhacaan oo waxaa lagu kasban karaa halista ugu yar.
Sida laga arki karo garaafka, calaamadaha ka imanaya RSI iyo MACD ayaa si wada jir ah u daahay, laakiin ma jiraan wax aan caadi ahayn tan. Dib udhaca darajooyinka kaladuwan waxay kujiraan dhamaan aaladaha farsamada, laakiin iskudarsankooda istiraatiijiyaddu waxay suurtogal ka dhigaysaa in dhibaatadan layareeyo oo suuqa lasoo galo barta ugufiican. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida dib u dhaca loo magdhabo, fiiri fiidiyowkeena ku saabsan istiraatiijiyadda "Saddexmidnimada".
Waqtiga uu dhacayo. Eeg inaad waddo koorso dhexe : aad u gaaban (1-2 daqiiqo) iyo aad u dheer (10-15 daqiiqo) ikhtiyaarka nolosha ayaa loo arkaa inay khatar tahay. Xaaladda kowaad, qiimuhu wuxuu halis u yahay «waqti la'aan» inuu u maro jihada saxda ah - waxaan helnay khasaaro. Tan labaad, suuqa wuxuu heli doonaa waqti uu ku soo jeesto, taas oo mar labaad siisa natiijo xun. Ha iloobin in istiraatiijiyaddu ay tahay mid xoqaysa, markaa iskuday inaadan dhaafin inta udhaxeysa daqiiqadaha 5-7.
Hal shay kale. Ka dib isbeddello xooggan , RSI, sida wax kale oo badan oo oscillator ah oo xad dhaaf ah, ayaa "cabi kara" muddo dheer aagagga muhiimka ah ama ku dhow heerka 50, adigoon ka tallaabin. Isla mar ahaantaana, MACD iyo SMA waxay siin karaan calaamado adag oo lagu kala dooran karo. Si aad u qaadato calaamadaha noocaas ah si aad u shaqeyso ama aadan u shaqeyn, qof walba waa inuu go'aansadaa naftiisa, laakiin weli, waxaa fiican in bilowga ah ay sugaan barta gelitaanka oo si buuxda loo sameeyay, iyadoo la raacayo istaraatiijiyadda «Saddexmidnimada» ay ku saabsan tahay 70-75% macaamil ganacsi oo guuleysta.